Pokémon Go dia hahazo fanavaozana lehibe miaraka amina endrika vaovao | Vaovao IPhone
Pokémon Go dia hahazo fanavaozana lehibe miaraka amin'ny fiasa vaovao
Pokémon Go dia tsy nihetsika intsony, na izany aza, misy hatrany ny vondron'ireo mpampiasa tsy mety miala amin'ny fampiharana. Izany no antony nanohizan'ny Niantic fanavaozana azy matetika, ary Google dia tsy iray amin'ireo mandao ny fampiharana azy amin'ny fomba rehetra. Omaly, Pokémon Go dia nahazo fanavaozana mahaliana, ao anatin'izany ny fanovana kely momba ny interface.Na izany aza, ny fanavaozana manaraka dia manome toky kokoa, izay hahafahantsika mifanakalo Pokémon eo amin'ireo mpampiasa samihafa ary hanampy zavaboary vaovao.
Ity ny lisitry ny vaovao nanampy omaly:
Inona no Vaovao ao amin'ny Version 1.19.1
- Azonao atao ny mamindra Pokémon maromaro indray miaraka amin'ny Profesora Willow amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana Pokémon.
- Nampidirina ireo sary masina karazana Pokémon rehefa manakaiky ny ady Gym sy ny efijery ady.
- Ny totalin'ny Candies nangonin'ny Partner Pokémon dia nampiana tao amin'ny efijery fampahalalan'ny namanao.
- Ny totalin'ny km nandehanan'ny namanao dia nampiana tamin'ny efijery fampahalalana isaky ny Pokémon izay efa mpiara-miasa aminao.
Na izany aza, araka ny efa nolazainay, ny fanavaozana manaraka dia ilay hahatafiditra zavaboary vaovao, ary izany dia tsy vitsy ny efa manana ny fihoaran'ny Pokédex. Nanomboka matanjaka ny fampiharana, ny zava-misy dia io niresaka momba ny nostalgia rehetra tsapanay ho an'izao rehetra izao PokémonNa izany aza, ny lazany dia nihena hatrany amin'ny toerana misy azy ankehitriny, mpampiasa vitsivitsy no tsy sahy manala azy amin'ny fitaovana iOS, indrindra satria tsy manaja ny fanjifana angona finday na amin'ny bateria, izay lasa enta-mavesatra loatra rehefa mampiasa azy io tsy tapaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Pokémon Go dia hahazo fanavaozana lehibe miaraka amin'ny fiasa vaovao
"Google dia tsy iray amin'ireo mandao ny fampiharana azy", inona no ifandraisan'ny Google amin'izany?
Io Pokémon Go dia avy any Niantic, ary Niantic dia fizarana an'ny Google. Tsy maintsy atao izany, Moises mpiara-miasa
Natomboka ho fizarana an'ny Google ny orinasa, saingy tsy tao anatin'ny herintaona mahery. Orinasa mahaleo tena izy izao.
Marina Luis V, misaotra tamin'ny fampahalalana!
Sago Mini Monsters, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Samsung dia manohy "tsy mijery ny hafa" ary mandefa ny Galaxy S7 Edge Black Pearl